Windows 11 uye bhizinesi. Iko kubwinya kweLinux kuri kuuya kudesktop? | Linux Vakapindwa muropa
Diego ChiGerman Gonzalez | | General, Linux vs. Windows, Noticias
Dzimwe nguva ndinokanganisa. Inenge mbiri kana katatu paawa. Semuenzaniso, ini ndaigara ndichichengeta kuti kusiyana naBill Gates naSteve Ballmer, Satya Nadella, achibva kunzvimbo iyo Microsoft yaive nemakwikwi akasimba, aiziva kuverenga musika. Zvakadaro, tingave takatarisana negaffe nyowani kubva kuMicrosoft. Uye, ino nguva Linux iri muchinzvimbo chekutora mukana nazvo.
1 Windows 11 uye bhizinesi. Kune matambudziko muparadhiso
2 Kubwinya kweLinux pane desktop (Corporate)
Windows 11 uye bhizinesi. Kune matambudziko muparadhiso
Pandinonyora izvi, Windows 11 yasara mazuva matatu kubva. Zvakadaro, hafu yemabhizimusi emabasa anoita kunge haasvike zvinodiwa neMicrosoftt. Uye mune yepashure-denda rehupfumi mamiriro (Uyezve kushomeka kwezvinhu) zvinoita sekunge pasina kufarira kukuru mukuvandudza michina inoshanda mushe mushe.
Lansweeper ikambani yedhijitari yekuchengetedza iyo ichangopfuura yakaitwa iyo ongororo yakaburitsa mhedzisiro yandakaburitsa pamusoro. Dhata yavo yakavakirwa pamakomputa mamirioni makumi matatu anoshandiswa nemasangano zviuru makumi matanhatuis
Kana chero munhu akafunga kuti isu takatarisana nenyaya yakafanana neiyi akaverengwa Darkcrizt, ndinofanira kujekesa izvozvo Sarudzo yeMicrosoft inosiya pre-2019 michina, kusanganisira mamwe echinomwe-chizvarwa Intel Core CPUs kana XNUMXst-chizvarwa AMD Zen CPUs.
Zvinoenderana nekudzidza, 44,4% yemachini inogona kusangana neWindows 11 CPU zvinodiwa nepo 52,5% ichipfuudza iyo Yakavimbika Platform Module 2.0 inodikanwa. Zvinhu zviri nani ne RAM (91,05%)
Rangarira kuti zvinodikanwa zvehardware zveWindows 11 zvinosanganisira inokwana 4 GB yekurangarira uye 64 GB yekuchengetedza; Iwe unofanirwa kuve neEFI Yakachengeteka Boot inogoneswa uye uve neDirectX 12 kana gare gare inoenderana kadhi yemifananidzo ine WDDM 2.0 mutyairi. Uye, ngatirege kukanganwa nezve Yakavimbika Platform Module (TPM) 2.0.
Izvo zvinodikanwa zvinofanirwa kuzadzikiswa kana iwe uchida kushandisa chaiwo michina mapuratifomu akadai seMicrosoft HyperV, VMware, uye Oracle VM Virtual Bhokisi.
Panyaya yemachina chaiwo, iyo chikamu cheTPM rutsigiro hachina basa.Anotsigirwa maCPU ari 44,9% nepo chete 66,4% ane RAM yakakwana
Nezve TPM, chete 0.23% yeavo vese mashopu ekushandira ane TPM 2.0 inogoneswa. Uye kunyange izvi zvichigona kuitwa, zvinoda basa rakawanda usati wafunga nezve kukwidziridzwa kuWindows 11.
Ehe, kuchine makore mana eWindows 4 rutsigiro rwasara uye zvakawanda zvinogona kuitika. Izvo zvinofanirwawo kucherechedzwa kuti Lansweeper iri mubhizinesi rekubatsira makambani kugadzirisa kwavo Hardware uye software, saka tinogona kunge tisina chokwadi nenhamba. Zvisinei zvinonzwika sezvakavimbika.
Kubwinya kweLinux pane desktop (Corporate)
Chokwadi ndechekuti kusvika parizvino Microsoft haigone kutsanangura (sezvazvakaitika paWindows 8) nei mumwe munhu achifanira kuisa Windows 11. Kunze kwekumwe kugadziridzwa kwekushongedza uye chipikirwa chisina kuzadzikiswa chekubvumidza kuiswa kweApplication mafomu, hapana chekuzvipembedza. Uye, zvakatonyanya kana isu tichinongedzera kumusika wemakambani (Ndeupi waizoramba uchishandisa XP kana vakausiya)
Iyo quirk yekuda TPM 2 (Yakavimbika Platform Module) inogona kungonzwisiswa sekuyedza kutengesa zvishandiso zvako. Ichokwadi kuti chiyero chekuchengetedza panyama chinoenderana nechip chinodzivirira zvirongwa zvakashata kubva mukugadzirisa. Asi, zvinoita kunge pasina mamiriro anoreva kumanikidza kushandiswa kwayo.
Kugoverwa kweLInux kuri munzvimbo isingaenzaniswi kutsiva Windows 10 muna 2025. Kwete chete kune aripo ekutsigira zvirongwa senge iwo ane Red Hat kana Canonical yekusimbisa rutsigiro, asi zvakare kupihwa kwenzvimbo dzekushandira neLinux yakaiswa natively, yakawedzera zvakanyanya.
Nekudaro, iyo hombe isina kusimba poindi ichiri software. Kunyangwe mhinduro dzakadai seLibreOffice neBlender dziine rutsigiro rwekutengesa, kuchine nzvimbo zhinji uko pasina nzira dzemakwikwi, uye mune izvo zviripo, havana rutsigiro rwezvokutengeserana kana zvinyorwa zvavo neshanduro hazvina kukwana.
Chinhu chakanaka ndechekuti panguva ino zviri kwatiri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Windows 11 uye bhizinesi. Iko kubwinya kweLinux kuri kuuya kudesktop?
Izvo hazvisi zvakapusa, munzvimbo yemakambani makambani mazhinji achiri kuvimba nemaapplication anomhanya paWindows uye kwete chaizvo sevashandisi vewebhu, saka ivo vaizofanira kutanga vatama (vozvigadzirisazve), izvo zvinonyanya kudhura (zvirinani mune pfupi pfupi) pane kudyara mu Hardware nyowani. Kune rimwe divi, isu tinofanirwa kufunga nezve kushomeka kwevashandi vanokwanisa kuti tipe rutsigiro rwehunyanzvi hwekufambisa kukuru kuenda kuGNU / Linux, isingagadziriswe kubva nhasi kusvika mangwana. Iyo nyaya yekusaziva kwevatongi-vanoita danho rerudzi irworwo uye zvinokuvadza zvinopesana neGNU / Linux, hazvina kukodzera kutaura nezvazvo.
Pindura kuna Charlie Brown
Dambudziko harisi software, nekuti iyo inouya mukugovera yakanaka kwazvo.
Mukambani medu tinoishandisa pazviteshi zvese zvebasa nemaseva. Isu tinongoshandisa Windows Server kupatsanura ma accounting uye kuwana masevhisi ehurumende kuburikidza nedesktop iri kure.
Dambudziko chairo itsika, sezvo vashandi vedu vasingazive mashandisiro eWindows zvakadaro. Izvo zviri mumakambani mazhinji, nekuti hapana munhu anonetsa kudzidza uye ivo vanomirira mumwe munhu kuti aone maitiro ekuisa maprinta kana kuabatanidza iwo kune internet.
Izvo zviri kungojaira uye izvo zvavanoita, kana kambani ikapa rairo uye ichigadzirira dhipatimendi reIT kupa rutsigiro rwakakodzera nerubatsiro. Ichi ndicho chokwadi chekuti tinogara mukambani medu: makore matanhatu achishanda naDebian uye masisitimu akagadzirirwa iyo system.
Zvinogona. Ipapo vanhu vane hunyanzvi hwekugadzira zvekuti havatoziva kuti ivo vatove vakajaira kushanda muhurongwa hwavaive vasina kujaira.
Mazuva ano, vanhu vazhinji havazive mashandisiro emakomputa avo, wedzera kuti pakupedzisira hazvina basa kuti unoriisa kuti rishande, chero bedzi paine mumwe munhu anoziva kugadzirisa matambudziko anomuka.
Chinyorwa ichi chinotaura nezve nyika yemubatanidzwa, asi izvi zvinoshandawo kumushandisi wekupedzisira. Kusaziva kwaSatya Nadella uye kutenda kwakashata kuchadhura Microsoft zvakanyanya. Iyi nyaya, kunyangwe iri imwe fomati, kuenderera kweBallmer kusvika pakurwiswa kwehardware. Mumakore aya chinangwa chake chete chave chekugadzira mari, masevhisi pamberi pehunyanzvi; chingwa chanhasi uye nzara yemangwana, uye isu tatova mune mangwana. Kuzvizivisa wega mutariri weGNU / Linux zvinonyadzisa kana zvirongwa zvavo zvikafamba nekuti zvese zvinofanirwa kuitwa pasi pemirairo yavo pane yakavharwa Hardware. Iwo mukana wegoridhe wenyika yeGNU / Linux, asi ndinotya kwazvo kuti murume uyu angangodonhedza bhurugwa rake kana kuti vachamuisa mumugwagwa pamberi pa2025.
«Mumakore aya chinangwa chake chete chave chekugadzira mari»
Ehe, Microsoft ikambani kwete hanzvadzi yerudo. Dai ndaive nekambani ndaizoitawo saizvozvo.
Mabhizinesi nevashandisi vakajairika vanoenderera mberi paWindows, nekuti ino sisitimu ndiyo yekomputa kubvira pakazvarwa desktop PC muma80s neBM uye hapana chinozochinja icho. Izvo zvinoitika mumafoni efoni ane android, inova imwe muyero uye hapana chinozochinja izvo, uye isu tinogona kuenderera nezvirongwa senge wasap kana teregiramu, hapana chinozochinja icho.
Ini ndiri mushandisi weWindows uye ini ndicharamba ndichive, sezvo yanga iri sisitimu iyo yakazadzisa zvandinoda zvakakwana kwemakore mazhinji nemhando dzese dzemahara zvirongwa dzakabatanidzwa.
GNU Linux ichafanirwa kugadzirisa chikamu chayo mumaseva ewebhu, tsamba, nezvimwe ... sezvo yanga isina kuitirwa maPC sezvaisina kuitirwa unix chero.
"Zvisinei, iyo hombe isina simba (STRONG) ichiri software"
Mazana eEMAHARA zvirongwa
Kurerukirwa kwekushandisa, kumisikidza uye pamusoro pezvose UPDATE, kwete iyo chete OS, yeese system software, kusanganisira madhiraivhu asingamiri kushanda pamwe nechero chero reboots muhupenyu hwecomputer - chete nekuda kweiyo kernel shanduko -.
Iwo mabhizinesi mapurogiramu anoshandiswa nemakambani makuru mumasangano avo enharaunda - emahara - kana iwo mamwe akabhadharwa.
Yakanaka yemahara kuona neQEMU kune iwo mapurogiramu anongowanikwa mune mamwe maOS, zvakanaka zvekuti Azure, iyo MS chikuva chegore rinomhanya paLinux.
Zvinogoneka kuti mukati mebhizinesi nharaunda zvakachipa kutsiva nemidziyo inodiwa kuti Win11 ishande, nekuti kufambisa software yanga ichishanda kwemakore inogona kunge isiri nyore, kana kushanda pasi peWine. Iko kungave nemukana uri mune wepakati mushandisi uyo nekuda kuve nekombuta ine yakafanana kuita kuri kudhura pane iyo inofanirwa kumhanyisa Win11, inogona kupedzisira yaendesa kune vanogumisa vashandisi kumba vanotora Linux zvishoma nezvishoma. Nekudaro, handingashamiswe kana mumwe munhu kana rimwe boka rikatsemuka Win11 kuti ishande pamakomputa pasina TPM, uye ava ndivo vanozove vazhinji vevashandisi pamwe nemakambani ari munyika yechitatu, seLatin America.
Charlie martinez akadaro
Mamwe makosi ekudzidzisa emacomputer sainzi nyanzvi kuGalicia, iyo inonzi FP, vakavandudza yavo Hardware gore rapfuura uye ndinofunga kuti parizvino havana kugutsikana neiyi yekuisa system in idle state inodya 8 GB yegondohwe, more apo iwo ari zvikwata izvo zveimwe zviitiko zvinoda kumhanya imwe, mbiri, kusvika kumamishini matatu chaiwo panguva imwe chete.
Parizvino, mune yavo mbiri bhutsu, ivo vari kuregedza kuiswa kwe Windows 10 kumashure, ichipa pekutanga kuna Debian neUbuntu uye zvegore, sezviri pachena, ivo vanongogamuchira chete GNU / Linux.
Izvi zvingava zvakanaka! Ndovimba kudaro.
Pindura kuna Charlie Martinez
Firefox ikozvino inotumira zvaunonyora mubara rekero kuMozilla